Ukuphumla kumazwe ashushu
Ungaphumla phi eMzantsi-mpuma Asia
Apho ungaya khona eSEA
Kubiza malini ukuqhawula umtshato kwiiPhilippines?
Udidi: Apho ungaya khona eSEA 0
Inkqubo ingathatha naphi na ukusuka kwi-1 ukuya kwi-10 iminyaka ukudlula kwinkqubo yenkundla yasePhilippine ecothayo ngokucothayo, exabisa ubuncinane i-$4,800 (emalunga ne-P250,000). Kuba...
Umbuzo wakho: Ngaba iiPhilippines ngumda wepleyiti eguqukayo?
Lo mda wepleyiti eguqukayo osebenzayo unabela macala omabini eZiqithi zasePhilippine, ukusuka eLuzon emantla ukuya kwiZiqithi zeCelebes ezisemazantsi. … Ukunikezelwa kwe...
Yintoni iDama kwiiPhilippines?
I-Dama ngumdlalo onokuthi uxhume ngokutsibayo odlalwa kwiiPhilippines. Kuyo, isiqwenga sokumkani sinokubanjwa ngokutsiba sisiya kwicala elinye. 5×5 igridi ye...
Eyona mpendulo ingcono: Ngaba iSingapore ikhuselekile kubahambi ababodwa ababhinqileyo?
Ewe. Ukuba ucinga ngohambo lwaseSingapore uwedwa, awukwazi ukukhetha ilizwe elikhuselekileyo onokuhamba kulo. … Icocekile, ikhuseleke kakhulu kwaye sisixeko esimangalisayo…
Umbuzo: Zingaphi iintlobo zezityalo eziseMalaysia?
Kukho malunga ne-8,500 yeentlobo zezityalo ze-vascular e-Peninsular Malaysia, kunye nezinye i-15,000 eMpuma. Amahlathi aseMpuma yeMalaysia kuqikelelwa ukuba ngawona…
Yeyiphi eyona nyanga ilungileyo yokutyelela iHalong Bay?
U-Okthobha ukuya kuDisemba (Ekwindla) lelona xesha lilungileyo lokutyelela iHalong Bay kunye nexesha lexesha eliphakamileyo ngenxa yemozulu emnandi kunye nethuba eliphantsi lemvula, nangona unako...
Zeziphi iintlobo zemozulu kwiiPhilippines?
IiPhilippines zineentlobo ezintlanu zemozulu: ihlathi elishinyeneyo, imonsoon eshinyeneyo, i-savanna yetropikhi, i-subtropical efumileyo kunye ne-oceanic (zombini zikwindawo eziphakamileyo) eziphawulwa bubushushu obuphezulu, uxinzelelo…
Ngaba i-MCDO kwiiPhilippines halal?
Ngaba zonke iiMcDonalds zisemthethweni? Ishishini lokutya okukhawulezayo kuquka. IMcDonalds, KFC, Hungry Jacks, Red Rooster, Subway, Domino zonke zisebenzisa inkukhu eqinisekisiweyo yehalal kunye netshizi, nangona uninzi lwe…
Ndingalala phi eHoi An?
Ngaba kungcono ukuhlala eHoi An okanye eDa Nang? Xa iindwendwe zikhetha iHoi An entle kakhulu eDa Nang, bathi kungenxa yokuba bafumana…
Ngaba ndingangena kuhlaziyo lwepasipoti ePhilippines?
Ngaba i-DFA iyabavumela abafake izicelo zokungena? KUPHELA AMATYALA APHELELEYO KUNYE NAXAXAKEKAYO avumelekileyo ukuhamba-ngena kwi-Courtesy Lane e-DFA Aseana kunye nezinye ii-Ofisi ze-Consular kwi-…
1 2 ... 1,044 Okulandelayo
Heyi! Sonke siyakuthanda ukuphumla. Ndiqinisekile ukuba uyithanda kakhulu. Ngokunyaniseka, nam ndiyayenza! Uninzi lwazo zonke ndithanda ukuhamba kude kwaye ixesha elide. Lo ngumnqweno wam! Zininzi iinketho kwi-Asia-mpuma ye-Asia apho unokuhamba khona. Ndicebisa iThailand njengendawo yendalo yonke kwaye ngeendlela ezininzi eyona ndawo ilungileyo yokuya eMzantsi-mpuma Asia.
Ngaba i-WeChat ingahlawula iMalaysia isetyenziswe eTshayina?
Eyona mpendulo ilungileyo: Uyibonisa njani intlonipho eVietnam?
Zeziphi ezona lwimi zithethwa kakhulu eVietnam?
Luluphi unqulo olubalaseleyo kwiiPhilippines?
Bangaphi abantu bakwiiPhilippines abangasifundisa isiNgesi phesheya?
Bangaphi abafundi abakwi-UP Manila?
Kutheni kukho ukunqongophala kobonelelo lwerayisi kwiiPhilippines?
© 2022 Phumla kumazwe ashushu
QAPHELA KUBAPHATHI OKULUNGILEYO! Zonke izixhobo zifakwe kwisiza ngokungqongqo ngenjongo yolwazi kunye nemfundo! Ukuba ukholelwa ukuba ukuthunyelwa kwayo nayiphi na imathiriyeli yophula ilungelo lakho lokushicilela, qiniseka ukuba uqhagamshelane nathi ngefomu yoqhagamshelwano kwaye izinto zakho ziya kususwa!